Donald Trump oo muujiyay inuu ka qalab arursanayo Aqalka Cad | HalQaran.com
Home Caalamka Donald Trump oo muujiyay inuu ka qalab arursanayo Aqalka Cad
Donald Trump oo muujiyay inuu ka qalab arursanayo Aqalka Cad
Washington (Halqaran.com) – Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay Khamiistii shalay inuu iska tagayo Aqalka Cad haddii Guddiga nidaamka ergada doorashada ay caddeyaan in Joe Biden uu yahay midka ku guulaystay Dorashada dalka Mareykanka Afarta sano soo socda.
Trump ayaa horay u diiday inuu aqbalo guul-daradii ka soo gaartay Doorashadii la qabtay 3-dii Bisha November, isagoo sheegay in doorashada laga shubtay uun marna aqbali doonin in laga guulastay
Arrintan ayaa u eg mid muujinaysa in Trump uu soo dabcay, aqoon sandoonana in laga guulaystay doorashada, islamarkaanan Mr Biden uu yahay madaxweynaha ku guulastay madaxtinimada dalka Mareykanka.
Codbixiyeyaasha nidaamka ergada doorashada ayaa kulmi doonaan bisha soo socota si ay cod rasmi ah uga dhigaan, iyadoo Dimuquraadiga Joe Biden loo dhaarin doono xilka madaxweynenimada 20-ka bisha Janaayo.
Donald Trump iyo taageerayaashiisa ayaa dacwado dhowr ah oo dhanka sharciga ah u gudbiyey doorashada, laakiin badankood waa la diiday.
Ugu dambeyn, waxay aheyd horaantii toddobaadkan, markii uu Donald Trump ogolaaday diyaarinta kala guurka rasmiga ah ee kooxda madaxweynaha la doortay ee Biden inuu bilowdo, kadib dhawr toddobaad oo uu hubaal la’aan ahaa hadda uu oggaalaaday in xilka wareejin doono.